Subxanallah:King ck oo sir mucjiso ah bannaanka keenay. - xog baahiye
Xog sir ah oo aannu ka helnay ilo ku dhow King ck, ayaa inoo caddeeyay in Ck uu ugu dambeyntii si qarsoodi ah u shaaciyay arrin uu mar walba ka qarin jiray bulshada ku xiran baraha bulshada.arrintan ayuu la wadaagay qaar kamid ah saaxiibada ay sida aad ka ah isugu dhow yihiin.
AKHRISO: Deg deg:Farxiyo Kabayare oo markale dhulka la jartay Safiyo Tusmo,Sir halis ahna shaacisay.
Waxa uu sheegay in sababtii ugu weyneyd ay ku kala tageen asaga iyo xaaskiisa ay ahayd jin aad u farabadan oo ay qabtay, kuwaasi oo marwalba soo weerari jiray habeyn kasta marka ay saacaddu tahay 1.00 pm.
Waxaa arrintan goor sii horreysay shaaciyay Sheekh Rusheeye yare walaalkii.waxa uuna daboolka ka rogay in walaalkii uu mar walba ka quraan saari jiray aaladda Zoomka.
AKHRISO: Deg deg:Dahir calasow oo sir badan shaaciyay kadib xarigii Kaadheri.
Ck ayaa arrintan soo bandhigay kadib markuu ogaaday in dad badan ay ku dacaayadeynayaan in uu yahay qof xun isla markaana aan gudan karin waajibaadka looga baahan yahay ninka ragga ah.
mar su’aal laga weydiiyay Sheekh rusheeye arrintan, ayaa waxa uu sheegay in Ck uu ahaa ruux wanaagsan oo aan marnaba diyaar u ahayn in gurigiisa uu si fudud ku burburo.
AKHRISO: Deg deg:Ilkacase oo sir culus bannaanka keenay kadib dagaalkii Naciimo jokar.